देउवाको यस्तो प्रस्तावलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले गरे ठाडै अस्वीकार, गठबन्धनभित्र खैलाबैला ! - Nepalese Times
सर्वोच्च अदालतमा आज पेसी तोकिएका कुन मुद्दामा के भयो ? 29 मिनेट अघि
विदेश भ्रमणमा नजान भन्दै सरकारले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति !2घण्टा अघि
राप्रपाको कार्यक्रम चल्दाचल्दै प्रचण्डको पारो तात्नेगरी सीपी मैनालीले के भनेका थिए ?4घण्टा अघि
एमाले महाधिवेशनमा नगएका प्रचण्ड राप्रपा महाधिवेशनमा भने सहभागी5घण्टा अघि
आजदेखि राप्रपाको महाधिवेशन, अध्यक्षमा कसले मार्ला बाजी ? 11 घण्टा अघि
आजदेखि झनै चिसो बढ्दै, यी ठाउँमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना 11 घण्टा अघि
एमाले केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक सकियो, के–के भयो निर्णय ? 21 घण्टा अघि
यी हुन् एमालेमा निर्विरोध निर्वाचित भएका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु (सूचीसहित) 21 घण्टा अघि
नेप्लिज संवाददाता ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार १७:२१ (1 महिना अघि) १६९ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७९ सालको वैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
देउवाले आफूनिकट नेता कार्यकर्तालाई वैशाखमा चुनाव हुने र त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ ।
गठबन्धन सरकार लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने निष्कर्षका साथ देउवाले अर्ली इलेक्सनको तयारी गरेका हुन् । देउवानिकट नेताहरूले यसको पुष्टि गरेका छन् ।
‘गठबन्धनको सरकार लामो समय टिक्दैन, टिक्यो भनेपनि झमेलाहरू आइरहन्छन्,’ देउवानिकट एक कांग्रेस नेताले भने, ‘त्यसैले वैशाखमै आमनिर्वाचन गर्ने गरी हामीले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छौं । सभापतिले पनि हामीलाई त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’
उनले संघीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने र त्यसपछिको मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने बताए ।
तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल भने अर्ली इलेक्सनका लागि तयार छैनन् । देउवासँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू वैशाखमै चुनावमा जान नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि देउवालाई अर्ली इलेक्सनमा जान आफ्नो तयारी नपुग्ने भएकाले संसदले पूर्ण कार्यकाल चल्न पाउनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रचण्ड, नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अर्ली इलेक्सनका लागि कन्भिन्स गर्न खोजिरहेका छन् भने आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘हामी अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैनौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले भने ।
उनलेत्यसबारे गठबन्धनमा कुनै सल्लाह र सहमति नभएकोसमेत बताए । तर कतिपय कांग्रेसका नेताहरूले छलफलमा अर्ली इलेक्सनमा जानु उपयुक्त हुने बताएकोसमेत उनले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छैन । संविधानमा अर्ली इलेक्सनका बारेमा केही लेखिएको छैन, अध्यक्ष नेपालनिकट एक नेताले भने ।
उनले भने – ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दा संसदले पूर्ण कार्यकाल चल्न पाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसैले अर्ली इलेक्सनको बहस संवैधानिक दायराभित्र छैन ।’
उनका अनुसार नेकपा एस भर्खरै बनेकाले संगठित हुन समय लाग्नेछ । अर्ली इलेक्सन भइहालेमा आफूहरूलाई घाटा पुग्ने नेकपा एसको विश्लेषण छ ।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको तीन महिनापछि मात्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको थियो ।
सरकार संचालनको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र खटपट शुरू भइसकेको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँड, राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति र अन्य कतिपय कामहरूमा देउवाले एकलौटी गर्न थालेको गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
यही कारण पनि कांग्रेस गठबन्धन सरकार लामो समयसम्म चलाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको हो । अर्ली इलेक्सनका लागि नेकपा एमाले भने तयार छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मंचबाट नै अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि आफ्नो गृहजिल्ला झापामा आयोजित चियापान कार्यक्रममा ओलीले अर्ली इलेक्सन घोषणा हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए । त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
आफू प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले पुस ५ र जेठ ८ गते दुवैपटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेर चुनावको घोषणा गरेका थिए । दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।
पछिल्लो पटक असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको सरकार बिस्थापित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत दिएको थियो ।
अर्ली इलेक्सनलाई लिएर नै सत्तारूढ गठबन्धनबीच खटपट शुरू हुन थालेको छ । कांग्रेसमा भने अर्ली इलेक्सनमा प्रायः सबै शीर्ष नेताहरू सहमत देखिन्छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने वैशाखमा नभई आउँदा २०७९ सालको मङ्सिरमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव देउवासामु राख्ने गरेका छन् । तर देउवाले त्यसमा सहमति भने जनाईसकेका छैनन् ।
ईश्वर पोखरेलले कमल थापासँग गरे संगै हिँड्ने प्रस्ताव, के गर्लान् थापा ?